Leader ကောင်းတယောက်ဆိုတာ ………. – ADS Myanmar Blog
Leader ကောင်းတယောက်ဆိုတာ ……….
သင်ဟာ Leader တယောက်လား ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်နိူင်မယ့်Leader အရည်အချင်းလေးတွေရှိနေပြီးလား ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။Leader ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Manager နှင့်မလွဲကြဖို့ လည်းသတိပေးပါရစေ။ဒါနဲ့ Leader ကောင်းတွရဲ့အမူအကျင့်လေးတွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Leader ကောင်းတွေဟာ ဆုံးဖြတ်ချက် ကောင်းကောင်းတွေကိုပိုပြီးချော မွေ့ အဆင်ပြေအောင်လုပ်လေ့ရှိပြီး အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်အောင် သူတို့ ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်လေ့ရှိပါတယ်။သူတို့ဟာ အဖွဲ့ သားတွေကို Follower တယောက်အနေနဲ့ ဆက်ဆံပြီး အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်တိုင်း Long Term ကို ကြည့်ရူတတ်ကြပါတယ် ။Objective တစ်ခုပဲ ကြည့်မနေဘဲ ရေရှည်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်တွေ ကို သူတို့ တွေ ဟာဖန်တီးလေ့ရှိပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်း မှာ နည်းလမ်းသစ်တွေကို ပိုမိုခုံမင်လေ့ရှိကြပြီး လုပ်ငန်းအတွက်ပိုမို အကျိူး ဖြစ်ထွန်းစေဖို့အတွက် Doing the thing right ဆိုတဲ့မူကို ကျင့်သုံးလေ့ရှိပါတယ် ။Leader အများစုဟာ Personality power ကိုသာသုံးလို့ သူတို့ ရဲ့ နောက်လိုက်အများစုကို လဲ ဆုပေး၊ ဆုမပေးစနစ်ကိုသာ ကျင့်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒီစာကိုဖတ်မိတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ လည်း Leader ကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပြီးလား ? ကိုယ် Leader တယောက်ဖြစ်လာပြီဆို ဒီလိုအမူအကျင့်ကောင်းကောင်းလေးတွေ နှင့် Leader တွေရဲ့ အမူအကျင့်ကို လေ့လာကြည့်ရူ နိူင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
သင့် ရဲ့ ထာဝရ www.ads.com.mm
Author elijahhtangPosted on October 6, 2015 October 6, 2015 Categories OtherTags Leader ကောင်းတယောက်ဆိုတာ ……….
Previous Previous post: တိုက်ခန်းအတူတူ ဌားရမ်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ ပျော်ရွှင် ၊ စိတ်ဝင်စားစရာများ
Next Next post: တပတ်အတွက်အ၀ယ်သင့်ဆုံးပစ္စည်း ( ၃) မျိုး